Edingekayo vitamin C akuyona ezingaphezu kwezingu-3 amagremu. By the way, lesi sici trace ubizwa nangokuthi ascorbic acid. Manje okuncane mayelana nemisebenzi yayo futhi emzimbeni wethu. Into ebaluleke kakhulu kubo - ukwandisa esikwazi ukuzivuselela ngayo umzimba womuntu umuntu ezifweni ezihlukahlukene. U-vitamin C ehilelekile umzimba, ikhuthaza ukumuncwa kangcono yensimbi kudaleke egazi. "Thola", lokhu kungaba isici ewusizo e ukudla isitshalo, ikakhulukazi lapha ume ulamula, kuyi-black currant rose okhalweni (omisiwe), black chokeberry, horseradish, dill, iparsley upelepele obomvu.
Lapho ukudla amavithamini anele, noma kabi amuncwa umzimba, isilinganiso sabo nsuku zonke, uvithamini C, okuyinto inendima enkulu, alanele emzimbeni. ukumuncwa Kubi okuqhubekisela isibindi, futhi pheshana emathunjini, kanye amanyikwe. Ngakho, nokushoda izakhi mkhondo ewusizo, ikakhulukazi, vitamin C, umuntu sihlangabezane ukukhathala okusheshayo yimuphi umsebenzi futhi angafuni kudla. Kwezinye izimo, izinsini uqale opha, isikhumba izibazi ezibonakalayo, futhi imikhuhlane ziphathwa isikhathi eside ngokwanele. Uma izimpawu ukuntula uvithamini C emzimbeni kakade ebonakalayo kakhulu, ukungayazi kwabo leyo esiphuthumayo ukugcwalisa, ikakhulukazi ezinganeni.
Uma uthola izinga ezidingekayo sika-vitamin C iqala asebenzayo emzimbeni womuntu. Waphinda etholakala kakhulu e ukudla isitshalo, kodwa northerners, labo umnyanya lo uhlobo ukudla ayitholakali, ungakwazi ukuzivumelanisa nalolu yokuntuleka Vitamin C ngokudla ukudla izinso, isibindi, inyamazane (izinyamazane ikakhulukazi ngolimi). Esifundeni ngasinye, libhekene "bebodwa" ezithelo noma emifino, futhi ngayinye kuwo zingatholakala ohlwini etholakalayo isitshalo ukudla nguye uvithamini C Somewhere ke ulamula amawolintshi, endaweni ethile - cranberry kanye cranberry, futhi umuntu ramson eduze. Nge zonke ezihlukahlukene imifino kufinyeleleke kakhulu nge wokuqukethwe eliphezulu lika-vitamin C kukhona amazambane, u-garlic kanye no-anyanisi.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ngisho uma uthola izinga ezidingekayo sika-vitamin C ubalekela ngokushesha emzimbeni, ngoba isici eziguquguqukayo. Emazingeni aphezulu, it is oxidized ngokushesha, le nqubo futhi kungaba nomthelela khona insimbi. Ngemva ukupheka imifino kuzo kuphela izingxenye ezimbili kwezintathu we isamba kavithamini C. Lapho ukuthosa njengoba sibhekana ekubhujisweni ezincane futhi isitoreji eside nokupheka ukudla kuholela ekwandeni ngokulahlekelwa lesi sici trace. Ngokuphelele walondoloza Vitamin C ne sauerkraut, nalo liyisifo esithathelana ukuphepha kakhulu nasemkhakheni imifino eqandisiwe nezithelo. Nokho, lapho defrosting Vitamin C iba ngempela engazinzile, ngakho-ke, imikhiqizo efana kumele ngokushesha kudliwa.
U-vitamin C inani lansuku zonke okuyinto 2-3 amagremu, njengoba sekushiwo, kuqukethwe esiningi e utshani-intuthwane (ifindo-utshani noma knotweed) okuyinto istaptyvaetsya emhlabeni imilenze. It kule ndaba ezingaphezu kuka e ulamula by izikhathi 3. Izinga nsuku zonke Vitamin, uvithamini C ngokukhethekile, kungashiwo futhi agcwaliswa esebenzisa thoroughwax (Ranniko pesy noma ulimi). Kuyo, le ngxenye elikhona izinombolo ezinkulu nakakhulu kunamanzi ku knotweed.
Thola yimuphi utshani ewusizo ebusika akusebenzi ngaso sonke isikhathi. Ukuze Ezimweni ezinjalo, kudingeka abe supply ekhaya amakhambi noma imithi zisekelwe vitamin C odingekayo ngosuku By endleleni, uvithamini C is threaded namuhla, ngisho amaphilisi kanye amaphilisi. Lapho Vitamin indlala entwasahlobo kakhulu ukusiza kahle emzimbeni lehla, ogama Ukwakheka kufanele lifake amavithamini C, A no B. Nokho, overabundance yalezi zinto ziwusizo kungaba nomphumela omubi nomzimba, ikakhulukazi ezinganeni. Ngakho-ke, kumelwe ngokuqinile athobele imiyalelo, okuyinto njalo enamathiselwe amavithamini.